ရွာသားအသစ်မိတ်ဆက်စာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရွာသားအသစ်မိတ်ဆက်စာ
Posted by kyaw swar on Jun 22, 2012 in Copy/Paste | 30 comments
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျွန်တော် ကတော့ ဧရာဝတီတိုင်း သား ဖြစ်ပါတယ် ဒီဆိုက်ကိုတော်တော် သဘောကျ ပါတယ် အားလုံး ကချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ညီ ကြပါတယ် ဟို ကုလားမပါဘူးနော် ကျွန်တော်စာတွေကိုလဲ ဝေဖန် လေကန်ပေးကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
About kyaw swar
kyaw swar has written5post in this Website..
View all posts by kyaw swar →
ညီလိုက်ကြ ညင်းလိုက်ကြ အော်လိုက်ကြ ပျော်လိုက်ကြနဲ့ ပါဘဲ.. စာရေးသူတွေရဲ့ လေယူရာမှာ ယိမ်းလို့ကကြချပြကြတဲ့ အတွက် ဝေဖန်လေကန်စရာပါလာရင်တော့ မပူနဲ့ဗျို့။
“ကုလား မပါဘူး နော်” ဆိုတော့ကာ … ကုလားလဲ လူပါပဲကွယ်။ ကုလား ထဲမှာလဲ မကောင်းတဲ့ လူတွေ ရှိသလို ကောင်းတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ် ဆိုတာလေး ………။
ဟိုကုလားဆို တာ အားလုံး ကိုပြော တာမဟုတ်ပါ ဘူးအကိုရယ်
ကျွန်တော်ပြောတာကို သိတဲ့သူသိ ပါတယ်ကိုယ်အကြောင်း မသိ
ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး မသိခြင်ထောင် ထောင် နေတာပါ
သူတို့ရင် ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေပြီး ဘင်င်္ဂါလီတွေ ဘက် ကနာနေတဲ့
ကောင်တွေ ကိုပြောတာပါ မူစလင်တိုင် ငိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး
ဟာရေးးး ဆာမိ …
တို့ရွာမှာ ရဟပ်ရော ဂျစ်ကားရောချိဘူးးးးး
မင်္ဂလာ ၁ဝ ပါ
မင်ဂလာ ပါကိုကျော်စွာ! နောက်ဆို ကိုကျော်စွာလည်း ဝေဖန် လေကန်လို့ ရပါပြီ ! ဧရာဝတီ တိုင် သားဆိုတော့ ရေကူးကျွမ်းကျင်မှာ ပေါ့နော် ! ( ၂ ) ကျပ် ပေးခဲ့ပြီး ( ၁ဝ ) လည်းယူသွားပါတယ် ! ဟဲဟဲ
ရေကူးကျွမ်းသလားမမေးနဲ့ ကျွန်တော့ဦူလေး နာဂစ်ထဲက ကူးနေတာ
ကုလားမပါဘူးဆိုလို့ပြောရအုံးမယ်။ခုfacebookထဲမှာ http://www.goo.gl/UQfLO, http://Y6EMG ဆို ပြီးအဲ့ဒါတွေအများကြီးပေါ်နေတယ်။အများကြီးဘဲ။နောက်က စာပြောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့စာတိုင်းရဲ့အောက်မှာ news-eleven.comဆိုပြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟို ဇာက်ကားထဲကလို ပြောလိုက်အုံးမယ်။ငါလူလည်ပါကွ==သတိထားကြပါ။နှောက်ယှက်နေတယ်။
ကိုကျော်စွာရေ…ကြိုဆိုပါတယ်နော်… ဒါနဲ့စကားမစပ် ဟုမ်းပေ့ချ်မှာ စတစ်ကီလုပ်ထားတဲ့ အပေါ်ဆုံးက ပို့စ်လေး ၃ခုကိုလည်း လေ့လာပြီး စိတ်ပါဝင်စားရင် ပါဝင်စေလိုပါတယ်…. ဟိုအစ်ကိုဝင်းကိုလှိုင်လိုကြော်ငြာဝင်ကြည့်တာ…အဟိ.. :-)
အားလုံး ကချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ညီ ကြပါတယ် ဟို ကုလားမပါဘူးနော်
ကိုကျော်စွာ စတင်ပြီးမိတ်ဆက်တယ်လဲ ဆိုသေးတယ်။
ကုလား မပါဘူး၊ ကုလားမ ပါဘူးနဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ စာသားတွေပါနေပါလား။
မိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာ အဲလိုမသုံးသင့်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။
ဘယ်လူမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် အကျင့်ကောင်းတဲ့သူ၊ အကျင့်မကောင်းတဲ့သူ ရှိကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က အကျင့်မကောင်းတဲ့သူ၊ အကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေကိုသာ ရှုတ်ချကြတာပါ။
အမှန်ပါဘဲဗျာ. မိတ်ဆက်စာကြည့်ပြီး လန် ့သွားပါ၏။
lu lay says:
တခါရေငုပ်ရင် ၃ ရက်လောက်ကြာတယ်
ရက်လေဘယ်လ် ကြက်ကြော်နဲ. ပူဇော်ပသပါတယ်….. အဲအဲ ဟုတ်ပါဘူး ကြိုဆိုပါတယ်လို……… ဟဲဟဲဟဲ
မာကလာပင်ပါ ကိုကျော်စွာရေ …
ပျူငှာစွာ ကြိုဆိုပါတယ်နော့ ..
( ကတော့ .. ကတော့ .. ကတွက် … )
အယ် … ဒီကြက်ဖကြီးက တိုက်ပွဲကို သွားချင်နေပြီထင်တယ် ..
ချိန်းပွဲလေးရှိလို့ သွားတိုက်လိုက်ဦးမယ် …
1 အံဇာတုန်းလေး ဘယ်ပျောက်နေသလဲ မတွေ့တာကြာလု့ိ
တိုက်ပွဲခေါ်သံက ပြီးသွားတာ ကြာလှပြီ။
2 ရွာသားအသစ်ကလေး ကြိုဆိုပါတယ်လို့ပြောရင်
သားသား ပျောက်ပါဘူး ဖေဂျီးရယ် ..
ဒီရက်ပိုင်း တုပ်ကွေးနဲ့ ဂီနေလို့ …
အသစ်ကလေး ဆိုတာနဲ့ ကြိုကြရတာ..
အသစ်သာဆိုတယ် တရွာမပြောင်းဈေးမကောင်းတွေတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်..။
ပြောသေးတယ် ၁၆နှစ် ၁၆နှစ် နဲ့ လုပ်သက်ကိုပြောတာတဲ့…းP
ဧရာဝတီတိုင်းသားအချင်းချင်း ရွာထဲမှာ တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။
စာရေးတင်ဖို့ တာဝန်ယူပါ။ ဝေဖန်လေကန်ပေးဖို့ ရွာသူရွာသားတွေက တာဝန်ယူပါတယ်။
“credit to တောင်ကြီးမောက်မယ်”
ဒီနှစ်ထဲမှာ အသစ်အသစ်တွေနဲ့ သတင်းသတင်းလေးတွေ ပိုများလာပြီး ရွာကြီး စည်ကားနေပါပြီ။ ထပ်မံပြီးလည်း အသစ်အသစ်တွေကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ စာလေးတွေလည်း စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပါမယ်။
မ မနောရေ အစ်မကိုကြုံတုန်းဂုဏ်ယူပါကြောင်းပြောမယ်နော် ဟိုရက်ကအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပို့စ်မှာမပြောလိုက်ရလို့။
ကျွန်တော်ကို ကျွန်တော်လည်း မိတ်ဆက် ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ရန်ကုန်ကပါ။ ခင်ဗျ..။ ကျွန်တော်က အာဂဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ဒီရွှာ အဲ မန်တလေးဂေဇက် မှာ ရေးပါတယ်ခင်ဂျ..။ ကျွန်တော်က ရေးတစ်ချက် မရေးတစ်ချက်ဆိုတော့ မေ့သွားမှာဆိုးလို့ပါခင်ဂျ။ ကျွန်တော့် စာတွေကိုလည်း ဝေဖန်ပေးကြပါဦး ခင်ဂျ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခင်ဂျ။
ရိုးသားကြိုးစား ဧရာဝတီသား ပေါ့ဗျာ…
မင်္ဂလာပါ ကိုဧရာ.. ဝတီ.. တိုင်းသား.. ကိုကျော်.. စွာ
အဲ..အဲလိုဆိုတော့ နာမည်လေးက လှသွားတယ်နော်..
ရွာထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော် ကတော့ ဧရာဝတီတိုင်း သား ဖြစ်ပါတယ်
် ဒီဆိုက်ကိုတော်တော် သဘောကျ ပါတယ်
(ဒီဆိုက်ဆိုတာ 50-40-60 ဆိုက်ကိုပြောတာလား)
အားလုံး ကချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ညီ ကြပါတယ်
(မညီတာမတွေ့သေးခင်တော့ပြောထားအုံးပေါ့ နောက်မှ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လာမပြောနဲ့)
6. လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊ အသားအရောင် ခွဲခြားမုန်းတီးမှုဖြစ်စေသော စာများမတင်ရ။
(ကျွန်တော်စာတွေကိုလဲ ဝေဖန် လေကန်ပေးကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။
ရွာသူများ က ပါရေစိယမ်ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ပြီးရွာသားများကတော့ ရူးနှမ်းမှာထိုင်တတ်ပါတယ်။ )
ဆိုတော့ ခင်ဗျားမပါဘူးဆိုတဲ့လူရော ပါ ပါသလား။
ချွန်ထော် ရွားထဲမှာ ပျော်တယ်နော်
အားကိုဂျီး မိတ်ဆက်တယ်နော် ကုလားကို ဖယ်ထားတယ်နော်
ချွန်ထော် အားဂျီး စိတ်မကောင်းဘူးနော် ဝမ်းနည်းတယ်ကား…
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: